Fanakanana ny fifidianana: mijabajaba an-jambany ny amiraly Ratsiraka | NewsMada
Atao izay hisakanana ny fifidianana amin’izao. “Mino marimarina aho fa mbola azo atao ny misakana ity fifidianana ity amin’izao fotoana izao”, hoy izy. Ny mahavalalanina ny maro: sakanany ny fifidianana, nefa mirotsa-kofidina izy. Tsy maharesy lahatra ny fanazavany ny anton’izany. Mba hohenoina sy heverina ho manan-danja kokoa ny teniny sy ny tetiny no nirotsahany ho kandidà? Amin’ny ora farany ny tena, voatery tsy maintsy manao hoe rehefa izay ihany, aleo mba mirotsaka koa…
Tsy mahiratra amin’ny fanarahana akaiky ny fandehan-draharaha intsony? “Hanao fanapahan-kevitra ny Filankevi-panjakana. Ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) milaza hoe: “tsy anjaranay io”. Mikorontana izany ity firenena ity e!”, hoy izy.
“Misy zavatra tsy milamina izany matoa mifanipaka toy ny valala an-karona ny HCC sy ny Filankevi-panjakana”, hoy ihany izy. Tsy mbola nilaza ny fanapahany ity farany ka mifanipaka amin’ny inona? Tsy anjarany, hono, ny mitsara ny mpitsara. Nefa tsy efa fitsarana ambony ihany ve ny hoe mifanipaka ny HCC sy ny Filankevi-panjakana?
“Raha mandeha amin’izao io fifidianana io ka tsy misy arofanina, tsy milamina ny tany sy ny fanjakana, tsy mazava ny fitsipi-dalao: korontana mamoafady no hitranga eto. Angamba tsy hifankahitana eto… Amin’ny maha miaramila ny tenako, mijoro ny tena: aleo sakanana izany sao… “, hoy izy. Efa ao anatin’izay korontana na fanakorontanana izay ve ny fanakanana ny fifidianana?